Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Tunneling sy ny fanasoketana | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Tunneling sy ny fanasoketana | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Fahasalamana / Fitsaboana / Aretina / Inona no tsy fitovizan'ny fitrandrahana sy fanodikodinana
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny tunneling sy ny undermining dia ny tunneling amin'ny ankapobeny mandeha amin'ny lalana iray raha toa kosa ny fihodinana dia mety hitranga amin'ny lalana iray na maromaro.
Amin'ny fitantanana ratra dia ilaina ny mamaritra ny haben'ny tunneling na ny fihenan-danja. Noho izany, ny fitrandrahana sy ny fanalefahana dia fisehoan-javatra roa ampiasaina amin'ny fanombanana ny ratra. Miditra lalina kokoa ao anaty ilay tonelina. Izy io dia fantsona iray izay mandeha amin'ny lalana iray avy amin'ny fotony. Ny fanalefahana dia miteraka ratra lehibe izay tsy dia lehibe loatra. Mety hitranga amin'ny lalana iray na maromaro io. Samy tsy azo jerena amin'ny fomba mora ny fandefasana tunneling na ny fanodikodinana. Ny tonneling sy ny undermining dia fepetra lehibe. Miseho kely izy ireo rehefa mandinika ny hoditry ny hoditra isika. Saingy ireo ratra ireo dia lehibe kokoa noho izay hitantsika avy any ivelany.
2. Inona no atao hoe Tunneling?
3. Inona no atao hoe Undermining
4. Fitoviana - Fitrandrahana sy fanodinkodinana
5. Tunneling sy undermining amin'ny endrika Tabular
6. Famintinana - Tunneling vs Undermining
Inona no atao hoe Tunneling?
Tunneling dia fantsona na tionelina izay mivelatra amin'ny faran'ny ratra amin'ny fomba tsy mitarika. Mamokatra toerana maty io. Sinay tract dia mitovy dika amin'ny famelana. Miditra lalina any anaty tisu izy io. Ny fitrandrahana dia vokatry ny fanapotehina ny tavy subcutaneaux amin'ny fomba linear. Indraindray, ny tonelina dia mety hisokatra amin'ny farany miaraka amin'ny fisokafan'ny ratra hafa. Ny fitrandrahana dia azo refesina amin'ny famotopotorana, ary ny toerana misy azy dia azo faritana amin'ny alàlan'ny fomba famantaranandro. Misy ny mety ho fananganana abscess amin'ny tunneling. Tsy mora jerena an-tsaina ny fitrandrahana. Elaela ihany koa ny fanasitranana.
Inona no atao hoe Undermining?
Ny fanalefahana dia miteraka ratra lehibe misy vavahady kely. Noho izany, dia misy faritra midadasika kokoa noho ny tonneling. Amin'ny ankapobeny, ny fanosihosena dia miseho amin'ny lalana mihoatra ny iray. Tsy dia be loatra ny fanosihosena. Vokatry ny fikaohon-tany eo ambanin'ny sisin'ny ratra izany. Izy io dia azo refesina amin'ny famotopotorana mihazona mifanandrify amin'ny velaran'ny ratra. Tsy dia misy fatrany firy amin'ny famolavolana abscess amin'ny famotehana. Ny fanosihosena dia matetika tazana amin'ny marary voan'ny tsindry sy fery neuropathique. Mitovy amin'ny tunneling, ny fanalefahana dia tsy mora sary an-tsaina. Ankoatr'izay, ny fanosihosena dia maharitra fotoana lava vao sitrana.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'ny Tunneling sy ny undermining?
Ny fitrandrahana sy ny fanodinkodinana dia tranga roa amin'ny fanombanana ny ratra.
Samy toe-javatra lehibe ireo.
Rehefa mijery ny hoditry ny hoditra dia miseho ho kely izy roa, saingy lehibe kokoa.
Izy ireo dia azo refesina amin'ny famotopotorana.
Ny toerana misy azy ireo dia azo faritana amin'ny famantaranandro.
Tsy mora alaina sary an-tsaina foana izy ireo.
Samy maharitra elaela vao sitrana.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Tunneling sy ny undermining?
Ny fitrandrahana dia mivelatra amin'ny lalana iray, na dia mety hitatra iray na maromaro aza ny fanosihosena. Ka io no mahasamihafa indrindra ny tunneling sy ny undermining. Ankoatr'izay, làlana na fantsona ny tunneling, fa ny fanosihosena kosa dia ratra lehibe misokatra kely. Ankoatr'izay, ny tunneling dia miditra lalina kokoa amin'ny tavy raha tsy dia be loatra ny fanalefahana. Ankoatr'izay, ny fitrandrahana dia vokatry ny famotehana ny sela amin'ny alalàn'ny lalan-kely, fa ny fanosihosena kosa dia vokatry ny fikaohin'ny sela amin'ny sisin'ny ratra.
Ity infographic etsy ambany ity dia mitanisa ny fahasamihafana misy eo amin'ny tunneling sy ny undermining amin'ny endrika tabilaoro ho an'ny fampitahana mifanila.
Famintinana - Tunneling vs Undermining
Ny fitrandrahana sy ny fanalefahana dia karazana ratra roa voasokajy mandritra ny fanombanana ny ratra. Ny fitrandrahana dia mitranga rehefa simba amin'ny endriny linear ny sela ao anaty. Ny fanosihosena dia mitranga rehefa voahosotra ny sela eo ambanin'ny sisin'ny ratra. Ny fandefasana Tunneling dia tsy misy làlana, raha toa kosa ny fanosihosena dia mety hitranga amin'ny lalana mihoatra ny iray. Ankoatr'izay, ny tunneling dia mihanaka lalindalina kokoa amin'ny tavy raha tsy dia be loatra ny fanalefahana. Araka izany, ity no famintinana ny fahasamihafana misy eo amin'ny tunneling sy ny undermining.
1. " Ahoana ny fomba hanombanana ny ratra amin'ny fitrandrahana sy fanodikodinana ." WoundSource, 6 Mey 2020.
1. " 417 Fanamboarana ny tisy" Nosoratan'i OpenStax College - Anatomy & amp; Physiology, tranokala Connexions , 19 Jun 2013 (CC BY 3.0) tamin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny Anorexia sy Bulimia Fahasamihafana eo amin'ny Bell's Palsy sy ny Facial Palsy Fahasamihafana eo amin'ny hypothmia sy ny pnemonia Fahasamihafana eo amin'ny Hyperventilation sy Tachypnea Fahasamihafana eo amin'ny Cyst sy Polyp
Fahasamihafana eo amin'ny Recycle sy ny fampiasana indray
Fahasamihafana eo amin'ny Navy Blue Royal Blue sy Cobalt Blue
Fahasamihafana eo amin'ny ankehitriny sy ny fanomezana
Fahasamihafana eo amin'ny indemnité sy ny antoka
Fahasamihafana eo amin'ny karatra Maestro sy Visa